Filoha Rajoelina Andry: “Hisy “2e session” ny fanadinana bakalorea” | NewsMada
Filoha Rajoelina Andry: “Hisy “2e session” ny fanadinana bakalorea”
Par Taratra sur 07/10/2019
Nivoaka amin’ny fanginany manoloana ny raharaha mafampana eto amin’ny firenena ny filoha, Rajoelina Andry, omaly. Voaresaka ny lafiny fandriampahalemana, ny fifandraisana amin’ny any ivelany ary koa ny raharaha momba ny fanadinana bakalorea.
Hentitra ny filoham-pirenena. “Fanakorontanan-tsaina ny famerenana ny fanadinana bakalorea. Vahaolana : Andrasana ny valin’ny fanadinana. Arahaba soa ireo afaka. Hisy “2e session” manokana kosa ho an’ireo tsy afaka. Efa nisy teto izany, saingy nofoanana ka mamerina ireo tsy afaka amin’ity indray mandeha ity…”, hoy ny filoha Rajoelina. Nanteriny fa hiatrika izany “2e session” izany ireo tsy afaka noho ny fikorontanana teo amin’ny fikarakarana ny fanadinana sy ny laza adina nivoaka mialoha.
Nanteriny koa anefa fa tena fanakorontanana tsotra izao iny resaka fanadinana bakalorea iny ary nanondro ny anisan’ny tompon’andraikitra tamin’iny ny tenany. Nisy “proviseur” any Imerintsiatosika. Misy koa mpanabe tratra… “Natao ny fanadihadiana sy ny fisavan’ny mpitandro filaminana tany an-tranony ka tratra tao ny laza adina maromaro sy nandefasana azy sy ny nandray azy. Ny namoahana izany amin’ny tambajotran-tserasera… Mpikambana amin’ny antoko mpanohitra ankehitriny izy io. Tsy maintsy sazina araka ny lalàna ny tompon’andraikitra…”, hoy izy.
Nitondrany vahaolana koa ny momba ny fahamaroan’ireo voafonja ka anisan’izany ny fanafainganana ny fitsarana ireo nanao heloka madinika. Hojerena tsirairay ny antontan-taratasin’ireo tsy nanao heloka bevava : tsy namono olona na nangala-bolam-panjakana.. Hisy tany hambolena sy fampianarana asa koa ho an’ireo voafonja… “Mba manana asa refa mivoaka ny fonja… Ny hafa kosa, havoaka hanao lalana sy ho eny an-tsaha… Hatao ny famotsoran-keloka faobe ary hatsangana ny fonja vaovao…”, hoy izy.
Ankoatra izany, naneho ny alahelony momba ireo vehivavy malagasy miasa any ivelany iharan’ny vono sy fanolanana na koa lasa mivaro-tena ny filoha… Anisan’ny isehoan’izany koa anefa ny fanararaotam-pahefana atao amin’ny vehivavy eny amin’ny seranana Ivato. “Mandoa vola vao afaka mandeha any ivelany… Tsy mora ny mitantana izany satria misy fahazarana teo aloha ary misy tsy mahazaka ny fanovana ataontsika. Ka ho avy eny ivato aho hijery akaiky ny momba izany”, hoy ny filoha.
Mitsikera nefa tsy mahavita asa ny sasany…
Notsiahiviny koa ny sivy volana nitondrany tao amin’ny fifandraisana irasam-pirenena. Anisan’izany ny fitakiana ireo Nosy manodidina amin’i Frantsa. Ny nitsidihan’ny Papa Fransoa sy ny filohan’i Roanda, i Paul Kagame teto amintsika.
Eo amin’ny fandriampahalemana kosa, ny nahazoana angidimby sy fiaramanidina hiadiana amin’ny dahalo. Ny fanamboaran-dalàna : RN44, Ambilobe-Vohémar… “Miasa aloha isika vao mikabary fa tsy tahaka ny sasany mitsikera nefa tsy misy asa vita…”, hoy izy.